I-china High elastic non-slip posture line TPE yoga mat wholesale ukwenziwa kunye nefektri | Yiya
Umgca wokumelana nokungahambisani nomgangatho ophezulu we-TPE yoga mat wholesale
Iimpawu ezahlukeneyo zisetyenzisiwe ngaphambili nangasemva kumatshini weyoga, onokudlala isiphumo esihle sokulwa neskid xa usenza imithambo yeyoga kunye nokuphucula ukhuseleko lomthambo. Imveliso isebenzisa i-TPE ekumgangatho ophezulu njengempahla eluhlaza, inobuhlobo kwindalo, ayiyityhefu, kwaye akukho lula ukuyikrazula.
Igama lemveliso: Umgca wokuma kwetpe yoga mat
Ubungakanani beCarton: 52 * 40 * 65 (CM)
Imveliso yenziwe ngezinto ezintsha ze-TPE, akukho mfuneko yokuqunjelwa kobushushu, yonke inkqubo yemveliso isebenzisa itekhnoloji yokuguqula ishishini-ekhokela, ikhompyuter elawulwa ngokuzenzekelayo ubushushu bokubumba amagwebu;
Imveliso inyulu ngokubhekisele kwizixhobo, akukho zixhobo zasesekondari (inkunkuma) kwaye naziphi na izinto eziyingozi zongezwa, iintsimbi ezinzima azifakwanga, akukho ncasa iyacaphukisayo, kwaye izinto zokulwa neentsholongwane ziyongezwa.
Igama: I-TPE ephezulu ye-yoga engatyibilikiyo mat kwihowuliseyili
Ubukhulu: 6 mm kunye ne-8mm
Ubunzima: Malunga 1000 grams
Ubungakanani bemveliso: 183 * 61 * 0.6cm kunye no-183 * 61 * 0.8cm
Ubungakanani beCarton: 51 * 39 * 63 no-58 * 44 * 63 (iziqwenga ezili-12 / ibhokisi)
Nokuba ngumbala, ilogo, okanye umgca, unokwenziwa ngokwezifiso.
Ubume obunamacala amabini, Dlala eyona nto intle yokulwa neskid.
Ukuphinda kulunge, ukubamba kade
Egqithileyo Umthengisi we-TPE Yoga Mat e-China
Okulandelayo: intonga yezemidlalo yoqeqesho intonga ye-Feilishi intonga ethengisa yonke into
Umgca we-yoga mat mat
Taekwondo sandbag boxing sandbag abadala nkqo ...
Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba, iphazili yomthambo, Ingxowa yeYoga yokuHamba, Ingxowa yeYoga yeSling, I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle,